MockupsJar: Stock Mockups ho an'ny finday sy Desktop | Martech Zone
MockupsJar: Stock Mockups ho an'ny finday sy Desktop
Alakamisy, Aprily 9, 2015 Douglas Karr
Tena misy ny tsenan'entana na inona na inona - indrindra amin'ny tontolon'ny haitao marketing. Mino mafy aho amin'ny fitsitsiana fotoana ary tsy manao na inona na inona miasa mafy indroa. MockupsJar dia iray amin'ireo tolotra ireo.
Raha tokony hanakarama mpaka sary iray ianao ary asaivo maka sary ny rindranasao na ny tranokalanao amin'ny finday avo lenta, birao na amin'ny fitetezana finday - maninona raha mahazo sary mamokatra tsara miaraka amin'ny jiro tsara ary ampio ny pikantsary ho fanesoesoana be ?!
MockupJars dia tsotra tanteraka:
Misafidiana iray amin'ireo esoeso nomaniny. Manana karazany maro izahay amin'ny mockups izay ahafahanao misafidy iray.
Mampidira efijery fampiharana anao na misambotra tranokala mivantana amin'ny fidirana amin'ny url ary hovaina ny sary noho ny fanesoana nofidinao.
Ampidino amina vahaolana maro ny fanesoanao.
Bookmark MockupsJar ary omeo fanandramana hijerena ilay tonian-dahatsoratr'izy ireo. Efa vitany ny asa mafy ka afaka mifantoka amin'ilay asa lehibe ny mpamorona anao!
Tags: android mockupapple mockupfanesoana amin'ny browseriPhone mockupfanesoana findaymockupsjarsamsung mockup